IIMPAWU ZOKUSEBENZISANA NOKUCHAZA KWI-FACIAL - China abavelisi be-FACIAL ANTI-AGING abavelisi, abaxhasi
Ukwaluphala kwe-HIFU yokuHamba kwaBuso kuLusu lokuqinisa ulusu FL18
Lo matshini usebenzisa i-probes yamandla aphezulu ukuqhuba amaza omoya amaza ombane aphezulu kunye nokuguga okuchasene nobunzulu bolusu.
I-9D i-hifu ye-thermagic i-rf yesikhumba eqinisa ukushenxisa imibimbi kwi-Body Slimming F117
I-Hifu yongeza i-Theramagic entsha ngokudibanisa unyango olukhawulezayo kuphakamisa ubuso.yinto engabonakaliyo kwaye akukho nto isebenzayo ngaphakathi, iyakhawuleza kwaye ikhululekile, ukubeka ngokuchanekileyo kunye nokucinga, ukuphatha imibimbi kunye nolusu olukhulu ebusweni, ngapha nangapha nasemzimbeni.
Imisebenzi yePore yokuCutha ukuNciphisa iMibimbi ye-Electro-optical EOS 2
I-epidermis ipholile yincam ye-aplicator evaliweyo, eyonyusa ukunganyamezeli kolusu, ikhusela ngakumbi i-epidermis kwaye inyanzelise amandla e-RF ukuba angene nzulu kwindawo eshushu ngaphambili.
Ukwaluphala kwamabala amnyama okususa amabala kwi-Thermagic RF ye-Salon Thermagic V
Ukuhlaziywa kwangoko kwemixholo, kwaye njengangaphambili, nayo isebenzisa amandla erediyo yokutshisa ulusu ngaphakathi nangaphandle.
Ukwaluphala kweRF yobuso beRadar Ice eqingqiweyo yokuSusa imibimbi LB02
Ngokusebenzisa indlela yokuzipholisa eyahlukileyo, inokufikelela kubunzulu beithagethi kwimowudi yonyango yokuthanjiswa. ukwenzela ukuba izigulana zingaziva zibuhlungu.
Ukuncitshiswa komzimba we-Cellulite ukunciphisa umzimba kunye nokulahleka kobunzima be-RF BL02
Ukuphola koqhakamshelwano lwesahlulo sesandla kulawula ubushushu bolusu kwaye kukhusela izakhiwo ezintle zederm, ziqonde ukukhawulezisa ukubuyela komzimba xa uqinisa ulusu!
Idermabrasion yamanzi ejet yeoksijini jet exwebula i-H600
Umzimba weMetabolism: Umbane we-Bio-photon, i-RF magic microcurrent board Bio-photon: yomeleza umsebenzi weseli kwaye ukhuthaze ukukhula kweproteni ye-collagen.
Ukwaluphala ngokuGuga kweKhaya eliPhezulu leRF Ukuqinisa ubuso ukuPhakamisa umatshini woKhathalelo loLusu R8A
Ukuhamba rhoqo kunomathotholo akufani nelaser. Ukuhamba rhoqo kweRadiyo (RF) kuhlala kubhekisa kusukelo lweesekethe zombane.
4D Circle Rv Micro Ubushushu Handle RF Beauty Equipment RT08
Ukudluliselwa kombane okusebenzayo (CET) yindlela evumela ukuba umbane we-RF ugqithiselwe “ngomthamo” (umgaqo wombane wombane) kumzimba wesigulana ngokusebenzisa i-electrode yesicelo sangaphandle esishukumayo.
I-8 in1 Chela i-oksijini ye-oksijini ebusweni Ukucoca i-CV06
I-8 kwi-1 yokucoceka okunzulu kwe-oksijini yokutshiza i-BIO lift scrubber aqua umatshini we-hydro dermabrasion osebenza kakhulu ekuphuculeni ubume besikhumba, ukunciphisa imigca emihle kunye nemibimbi, kunye nokunika ulusu olunzulu kulusu.